Fonja Antanimora : nahazo «chapelle» vaovao ny kartien’ny voafonja tsy ampy taona | NewsMada
Fonja Antanimora : nahazo «chapelle» vaovao ny kartien’ny voafonja tsy ampy taona
Sady fanamarihana ny fanokafana ny faha-10 taona nijoroan’ny Fandrindrana nasionalin’ny asan’ny aumonierie eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) no fitokanana ny « chapelle » vaovao, ao amin’ny kartien’ny voafonja tsy ampy taona, ny notanterahina tao amin’ny fonjan’Antanimora, omaly.
« Endriky ny fiaraha-miasan’ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana ». Izay ny nilazan’ny filohan’ny aumonerie eo anivon’ny FJKM, ny mpitandrina Ralambomahay Hendrininosy, ity lanonana natao omaly ity. Asa voalohan’ny fiangonana ny fitoriana Filazantsara amin’ny toerana sy faritra ary amin’ny olona rehetra. Anisan’izany ny eny amin’ny fonja, ahitana ireo olona mila vonjy, na lahy na vavy, na kely na lehibe. “Sokajin’olona, heverina ho voailika eo anivon’ny fiarahamonina ny voafonja. Tsy Antanimora ihany fa ny fonja rehetra. Izany indrindra, hoy ny mpitandrina Ralambomahay Hendrininosy, ny antony ahatongavan’ny Fiangonana eto”. Tsy mandeha ila anefa izany asa fitoriana ny Filazantsara izany fa eo koa ny asa sosialy, amin’ny alalan’ny fanabeazana, fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fitsaboana, fanohanana amin’ny sakafo, fitafiana… ireo voafonja. Asa lehibe koa, ankoatra ireo, araka ny voalazany, ny fanomanana ireo voafonja amin’ny fiverenany eo anivon’ny ankohonana sy ny fiarahamonina rahatrizay mivoaka ao izy ireo.
Fanirian’ny aumonerie FJKM ny hivelaran’ny asa fitoriana ny Filazantsara sy ny asa fanabeazana, fitaizana sy fanarenana eo anivon’ny fonja, tahaka ity ao Antanimora ity, amin’ny fonja rehetra manerana ny Nosy. Ny fonja izay nambarany fa “toerana lalovana” ihany fa tsy sanatria “zohy fieren’ny jiolahy”. Raha miala ao ireo any aoriana, ho olona hanana ny toerany tokoa eo anivon’ny fiarahamonina sy ny fianakaviany.
Fankaherezana ireo manana andraikitra (ny aumonerie, ireo fikambanana samihafa, ny mpandraharahan’ny fonja…) rehetra ao anivon’ny fonja kosa ny nanamarika ny fandraisam-pitenenan’ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Andriamahazosoa Irako Ammi. Fampaherezana ireo voafonja ihany koa, araka voasoratra hoe “Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanak’i Abrahama koa”, “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” (Lioka 19 : 9, 10). Nisy ireo boky samihafa (fampianaram-pinoana, fanabeazana, fitoriana ny Filazantsara) natolony ho an’ity toeram-pivavahana ity, ho an’ireo voafonja ho fampiharana ny hoe “vontosy Filazantsara ny fonja”.
Nankasitrahany manokana tamin’izao fotoana, omaly, izao koa ny fiaraha-miasa amin’ireo fikambanana, toy ny Association Betlehema, Arahaba soa, sy ny fianakaviana Andriantsimbazafy Stephen, angady nananana sy vy nahitana ity “chapelle” vaovao notokanana omaly ity.